Rosia nahomby tamin'ny fitsapana ny fiaramanidina mpandeha vaventy vita Sovietika vita voalohany | Vaovao momba ny dia any Russia
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Russia » Rosia nahomby tamin'ny fitsapana ny fiaramanidina mpandeha vaventy vita Sovietika voalohany
Ny lalan'ny fitsapana dia nisaina manokana noho ny hamandoana avo sy ny maripana ambany hita tao, izay mitarika fiorenan'ny ranomandry amin'ny sehatry ny fiaramanidina
Ny fitsapana fiaramanidina dia natao tamin'ny toe-javatra mangatsiaka
Ny sidina dia nanao sidina 14 namakivaky ny moron'ny Ranomasina Fotsy, ampahan'ny ranomasina Barents ary ny faritra Subpolar Urals
Irkut dia nahavita nanidina ny MC-21 nandritra ny telo taona mahery
Ny manampahefana misahana ny fiaramanidina sivily Rosiana dia nanao fitsapana ny fiaramanidina mpandeha an-trano lehibe voalohany taorian'ny Sovietika, ny MC-21-300.
Ny fitsapana dia natao tamin'ny toe-javatra mangatsiaka hijerena ny fiasan'ny fiaramanidina rehefa rakotry ny ranomandry. Vita soa aman-tsara ny fiaramanidina fiaramanidina tamina vanim-potoana icing tany avaratr'i Russia ary afaka mandeha soa aman-tsara amin'ny fepetra henjana izy, ny mpanamboatra azy Irkut Corporation, ampahany amin'ny United Aircraft Corporation (UAC), nambara tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity.
Ny sidina dia nahavita sidina 14 maharitra hatramin'ny telo ka hatramin'ny dimy ora namakivaky ny moron'ny Ranomasina White, ampahan'ny ranomasina Barents ary ny faritra Subpolar Urals. Nosafidina manokana ireo làlana noho ny hamandoana avo sy ny maripana ambany hita ao, izay mitarika fiorenan'ny ranomandry amin'ny sehatry ny fiaramanidina.
Ny sidina fanamarinana dia natao tamin'ny dingana maromaro. Voalohany, nitady rahona ireo mpiasa fa hamorona ny fepetra takiana. Fitaovana manokana napetraka teo amin'ny fiaramanidina, ao anatin'izany ny fakan-tsary 12, avy eo dia namela azy ireo hifehy ny haben'ny velaran'ny fiaramanidina nofonosina ranomandry ary nanoratra ny fomba fiasan'izy ireo. Rehefa avy matevina ny sosona ranomandry dia nahazo haavo ny fiaramanidina hijerena ny zava-bitany tamin'ireny fepetra ireny.
Ny hatevin'ny ranomandry dia nitombo isaky ny sidina fitsapana, nahatratra valo santimetatra ihany tamin'ny farany - mihoatra ny ampy hilazana fa nahomby tamin'ny fitsapana ilay fiaramanidina. Raha ny fenitra rosiana sy eropeana dia tsy tokony hamoy ny toetrany noforonina ny fiaramanidina raha rakotra ranomandry 7.6 sm (3 santimetatra) ny hateviny.
Rehefa vita ny sidina fanamarinana dia niverina avy any Arkhangelsk nankany amin'ny seranam-piara-manidina Zhukovsky akaikin'i Moskoa ny MC-21-300.
Irkut dia nahavita nanidina ny MC-21 tamim-pahombiazana nandritra ny telo taona mahery, saingy ny tsy fahazoana ireo ampahany namboarin'i Etazonia ho an'ny fiaramanidina dia nanery ny orinasa hieritreritra ny fomba hanandramana hampivelatra ny fiaramanidina amin'ny fampiasana singa anatiny kokoa. Ny varian'ilay fiaramanidina MC-21, fantatra amin'ny anarana hoe MC-21-310, izay manana maotera roa PD-14 Rosiana no nanao ny sidina voalohany tamin'ny faran'ny taona lasa.